U-Pompeo Usola Uhulumende weleChina Ngokubopha uXu Zhangrun
UMnu. Mike Pompeo
Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uMnumzana Mike Pompeo, usole uhulumende wakweleChina, ngokubotshwa, kukaMnu. Xu Zhangrun, ingcwethi ecibungula ezombusazwe, mhlaka 6 walinyanga kaNtulikazi.
"Silusizi ngempela ngodaba lokubotshwa kukaMnumzana Xu Zhangrun, ngenxa yokuthi ubekhuluma umbono wakhe ngendlela uhulumende wakweleChina, okhokhelwa nguMnu. Xi Jinping, aphatha ngayo udaba lokumemetheka komkuhlane weCoronavirus kulelozwe. UZhangrun ubekhuluma iqiniso. Kumele aphume ejele."
UPompeo uqhubeke ethi uhulumende weChina akakhulumi iqiniso, ngokumemetheka komkuhlane weCoronavirus elizweni lelo, wona osubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele.
"Sicela ukuthi uhulumende wakweleChina akhulume iqiniso mayelana ngalumkuhlane. Lokhu akulani lezombusazwe. Ibandla leChinese Community Party kumele litshele uzulu wonke jikelele iqiniso mayelana ngomkhuhlane weCoronavirus."
U Pompeo wazise ukuba abakabi kwazi ukuthi ngubani sibi sibili umuntu owakuqala owabanjwa ngumkhuhlane weCOVID-19. Uhulumende wakwele China wazise inhlanganiso ye World Health Organization ukuba ilakho ukusungula uphenyo olujonge ukukhangelisisa udaba lomkuhlane weCoronavirus ukuze umhlaba wonke jikele ube lolwazi lokuthi ngubani umuntu owakuqala owabanjwa yilumkuhlane.
UPompeo yena uthi kumele kuba labantu abathembekileyo okumele baqhube lolophenyo, ngoba umhlaba ufuna impumela eliqiniso, ezanceda amazwe wonke, hatshi ukusiza eleChina kuphela. UPompeo uphinde wathi, eleChina latshela abeWHO ngokuqhamuka kwalumkhuhlane elizweni lelo kudala.
"Sesilolwazi oluthile oluveza sobala ukuthi eleChina beliqhamba amanga mayelana ngokuqhamuka kwalumkhuhlane. Abammeli balelozwe enhlanganisweni yeWorld Health Organization, bazise uzulu ngokuqhamuka kwalumkhuhlane ngemva kokuba inhlanganiso ye Wuhan Municipal Health communission yazise uzulu ukuthi kukhona okutshaya amanzi."
U-Secretary of State Pompeo uthi njenge lizwe, eleMelika lilesiqiniseko sokuthi uzulu emhlabeni jikelele ojabulela umbuso okhululekileyo wentando kazulu, emhlabeni jikelele uzananzelela ingozi edalwa ngamanga ebandla leCCP, elizweni lelo laphandle ngakhoke uzamanyana afake amakhanda ndawonye aphume lamacebo wokulondolozwa kwelungelo loluntu okuzanceda abantu bonke emhlabeni jikelele.
Mfumfu 28, 2020
Amazwi Aveza Imbono Kahulumende weMelika